आवर्त सारणीका जनक माडलीव
आवर्त सारणी अथवा तत्वहरूको आवर्त सारणी रासायनिक तत्वहरूलाई तिनको संगत विशेषताहरूका साथ एउटा सारणीका रूपमा दर्शाउने एउटा व्यवस्था हो। वर्तमान आवर्त सारणीमा ११७ ज्ञात तत्व सम्मिलित छन्। रूसी रसायन-शास्त्री माडलीफ (सही उच्चारण- मेन्देलेयेव)ले सन १८६९मा आवर्त नियम प्रस्तुत गरे। यसका अनुसार,
"तत्वहरूका भौतिक र रासायनिक गुण तिनको परमाणुभारहरूका आवर्तफलन हुन्छन्।"
अर्थात यदि तत्वहरूलाई परमाणु भारका वृद्धिक्रममा राखियो भनें त्यो तत्व जसको गुण समान हुन्छन् एउटा निश्चित अवधिका पछि आउँछन्। माडलीवले यस सारणीका सहारे तत्वहरूका भौतिक एवं रासायनिक गुणहरूका आवर्ती हुनेका पहलूलाई प्रदर्शित गर्ने प्रयत्न गरे। १८१५देखि १९१३सम्म यसमा धेरै सुधार भए ताकि नयाँ आविष्कृत तत्वहरूलाई उचित स्थान दिन सकियोस् र सारणी नयाँ जानकारीहरूका अनुरूप हो। रसायन शास्त्रीहरूका लागि आवर्त सारणी अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हो। यसका कारण कम तत्वहरूका गुणधर्महरूलाई नैं याद राख्नाले काम चल्छ किनभनें आवर्त सारणीमा कुनै समूह (उर्ध्वाधर पंक्ति) वा कुनै आवर्त (क्षैतिज पंक्ति)मा गुणधर्म एउटा निश्चित क्रमदेखि एवं तर्कसम्मत तरिकाले बदल्दछन्।
तत्वहरूका परमाणु भारका वृद्धि क्रममा क्रमबद्ध गर्नमा क्षैतिज पंक्तिहरू प्राप्त हुन्छन् जसलाई आवर्त भन्दछन्। आवर्त नियमका अनुसार तत्वहरूलाई परमाणु भारका वृद्धि क्रममा क्षैतिज पंक्तिहरूमा सजाउनमा सामन गुण भएका तत्व एउटा नैं उर्ध्वाधर कालममा उपस्थित रहन्छन्। यी उर्ध्वाधर कालमका वर्ग भन्दछन्। मडलीफको आवर्त सारणीमा कुल ८ वर्ग थिए किनभनें त्यस समय निष्क्रिय ग्यासको खोज भएको थिएन। पछि निष्क्रिय ग्यासको खोजका पश्चात आधुनिक आवर्त सारणीमा ९ औं वर्गलाई सामिल गरिएको हो। यस ९ औं वर्गलाई ० (शून्य वर्ग) भन्दछन्। वर्ग एकदेखि आठौं वर्गलाई रोमन अक्षर I, II, III, IV, V, VI, VII तथा VIII द्वारा प्रदर्शित गरिन्छ। नवहरू वर्गलाई ० द्वारा प्रदर्शित गरिन्छ। यसका विकासका अन्तिम चरणमा राग, वर्नर, बोहर र बरी आदि वैज्ञानिकहरूले आवर्त सारणीको आधुनिकतम रूप बनाए जुन वर्तमानसम्म चलनमा हो। यिनले माडेलिवको आवर्त सारणीमा उपस्थित श्रेणिहरूलाई खत्म गरे तथा वर्गोको संख्यालाई ९देखि बढाएर १८ गरे। यसका पछि पनि हाइड्रोजनको दुइ स्थानहरूमा हुनु र लेथेनाइड र एक्टीनाइड तत्वहरूलाई सारणीमा स्थान न हुनु दुइ मुख्य दोष अजसम्म छन्।
१ समूह एवं आवर्त
२ रासायनिक तत्व
३ रासायनिक तत्व
आवर्त सारणीका उर्ध्व पंक्तिहरूलाई समूह भनिन्छ। तत्वहरूका वर्गीकरणको दृष्टिदेखि समूहहरूलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ। केही समूहहरूमा, तत्व समान गुण दर्शा्दछन्. यी समूहहरूका नाम क्षारीय तत्व, क्षारीय पार्थिव धातु, छलोजेन, निक्टोजेन, चाल्कोजेन र अक्रिय ग्यास। आवर्त सारणीका क्षैतिज पंक्तिहरूलाई आवर्त भन्दछन्. तर पनि तत्वहरूका वर्गीकरणमा समूह अधिक महत्वपूर्ण मानिन्छन्, फेरि आवर्त सारणीमा धेरै स्थल यस्ता हुन्छन् जहां आवर्तको महत्व अधिक हुन जान्छ। उदाहरणका रूपमा डी-ब्लक वा संक्रमण धातुहरू र एफ-ब्लकलाई लिन सकिन्छ।